‘महानायक’ वि’वाद टुंग्याउन राजेश हमाल र शोभित बस्नेत बीच भेट ! - Thulo khabar
‘महानायक’ वि’वाद टुंग्याउन राजेश हमाल र शोभित बस्नेत बीच भेट !
काठमाडौं : निर्देशक शोभित बस्नेतले कयौं अन्तर्वार्तामा राजेश हमाललाई ‘महानायक’ नभइ ‘सुपरस्टार’ भनेका छन् । धेरै सुपरहिट फिल्म दिएकाले यो उपाधिको हकदार भुवन केसी रहेको उनको तर्क हुन्थ्यो ।
दुई हप्ताअघि आफू निर्दे शित फिल्म ‘डाँडाको बरपीपल’ को गीत रिलिज कार्यक्रममा पनि उनले भुवन केसीलाई ‘नेपाली फिल्म क्षेत्रको एक मात्र असली महानायक’ भनेर सम्बोधन गरे । नेपाली फिल्म क्षेत्रमा एक रुपैयाँ पनि लगानी नगरेको व्यक्ति (राजेश हमाल) लाई ‘महानायक’ मान्न नसकिने उनको तर्क थियो ।
तर, यसपटक उनलाई आफ्नै बोली भारी प¥र्‍यो । सामाजिक सञ्जालमा दर्शकहरु उनीमाथि गा’ली ग’लौ’जमा उत्रिए। दर्शकको ठूलो वर्गले फिल्म बहिस्कार गर्नेसम्मको कुरा उठायो । ‘महानायक’ वि’वादको असर फिल्मको ‘का’ट्दिम्ला जुँगा’ गीतमाथि पनि पर्‍यो ।
यो विवादले प्रदर्शनको मुखमा रहेको फिल्मलाई गम्भीर असर गर्ने बुझेपछि उनले गत आइतवार ट्रेलर रिलिज कार्यक्रममा राजेश हमालको तस्वि’रलाई प्रमुख अ”तिथी बनाएर आफ्नो बुझाइ गलत रहेको बताउँदै दर्शकसँग माफी नै माग्न भ्याए ।
अबदेखि राजेश हमाल लाई ‘महानायक’ र भुवन केसीलाई ‘सुपर’स्टार’ भन्ने उनले वाचा समेत गरे । अर्थात् उनले फिल्म जोगाउन आ’त्मसमर्पण गरे । ‘महानायक’ विवादले गर्दा राजेश हमालसँग शोभितको सम्बन्ध चिसिएको थियो।यो विवादलाई टुंग्याउन पत्रकार प्रकाश सुवेदीले हमाल र शोभितबीच भेट गराउन मध्यस्थ कर्ताको भूमिका खेलेका छन्।
मंगलवार काठमाडौंको होटल अलफ्टमा छायांकन भएको ‘ग्ल्या मर गफ’ टेलिभिजन शोमा अतिथी भएर पुगेका राजेश हमालसँग पत्रकार सुवेदीले शोभितलाई बोलाएर भेट गराएका हुन् । उनीहरु बीच उक्त होटलमा करीब २ घन्टा कुराकानी भएको थियो ।